Dowladda Jibuuti oo diyaar u ah inay shirkadooda Air Jibuuti duulimaad ka bilowdo garoomada Puntland. | puntlandi.com
Dowladda Jibuuti oo diyaar u ah inay shirkadooda Air Jibuuti duulimaad ka bilowdo garoomada Puntland.
Garowe (Puntlandi) La taliyaha madaxweynaha dalka Jibuuti, Cabdiraxmaan Cabdulaahi Cali, ayaa sheegay dowladda Jibuuti inay diyaar u tahay in diyaaradooda Jibuuti Air ay duulimaadyo ka bilowdo garoomada Puntland.
Taliyaha madaxweynaha Jibuuti oo kamid ahaa masuuliyiintii lagu casuumay furitaanka garoonka diyaaradaha Garowe, ayaa cadeeyay inay ku faraxsan yihiin in diyaaradoodii ugu horeysay oo ganacsi ah ay kasoo degto Puntland, isagoo sheegay Puntland iyo Jibuuti inay yihiin dad walaalo ah oo wax badan ay ka dhexeeyaan.
Madaxweyne ku xigeenka Puntland ayaa balanqaaday dowladdu inay gacmo furan kusoo dhoweyndoonto shirkad kasta oo doonaysa inay duulimaad ka sameyso garoomada Puntland, wuxuu si gaar ah uga mahad celiyay diyaarada Air Jibuuti oo noqotay diyaaradii ugu horeysay oo heer caalami ah oo kasoo dagta garoonka cusub ee Garowe.
Dhinaca kale, garoonka diyaaradaha Garowe, ayaa isla shalay waxaa ka bilowday duulimaadyadii ugu horeeyay, waxaana ka duulay dadkii ugu horeeyay oo shacab ah, iyagoo aad usoo dhoweeyeen sida garoonka loo dhisay.